Running Man Myanmar Subtitles: June 2016
Running Man Ep-304 Myanmar Subtitle
Guest(s):Park Shin Hye, ?Lee Sung Kyung?, ??Kim Min Suk, Yoon Kyun Sang
အမဲလိုက်ပြိုင်ပွဲ(အပိုင်း၃၀၃)ရဲ့အဆက်​ကဒီအပိုင်းရဲ့အစမှာပါပါတယ်​။!!!တစ်​ပိုင်းတည်းလို့မထင်​သွားပါနဲ့။နောက်ပြီး...ဘုရင်မအစစ်က ဘယ်သူလဲဆိုတာ ရှာရမယ့် မစ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်​။ဘုရင်​မဆို​တော့​ကောင်​မ​လေး​ချော​ချော​လေး​တွေဆိုရင်​Running Man Members​တွေရဲ့​ပျော်​​နေတဲ့ပီတိ​တွေကို​တွေ့မြင်​ရမှာပါ။ ဘုရင်​မ...မှားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့....ပြစ်​ဒဏ်​ခံရမှာပါ။ဘယ်သူထိမလဲဆိုတာတော့ကွကို ဒေါင်းကြည့်​ကြပါ။ဘာသာပြန်​သူ​တော့Thomas Nicolasနဲ့SKLပါ။
Running Man Ep-303 Myanmar Subtitle
နည်းနည်း​နောက်​ကျသွားတာ​တောင်းပါတယ်​။​မစ်​ရှင်​က​တော့​တော်​​တော်​​ကောင်းပါတယ်​။ရယ်​လဲရယ်​ရပါတယ်​။mission နာမည်​ကိုကRunning Manအမဲလိုက်​ခြင်းပါ။
Running Man Ep-254 Myanmar Subtitle
Guest-Girls Generation,Hong Man,Choi Min Ho
Girls generationတဖွဲ့လုံးလာတဲ့အပိုင်းဘာ။အရင်​ကတစ်​ဖွဲ့​​​​ အ​နေနဲ့ မလာ​​ပေမဲ့ တ​ယောက်​ချင်းစီလာဖူးကြပါတယ်​​​​။ ​တော်​​တော်​ကြည့်​​ကောင်းပါတယ်​။RM members7​ယောက်​လုံးကgame worldထဲကိုinviteလုပ်​ခံရပြီး gameထဲက​နေ မူလကမ္ဘာကို ပြ​န်​သွားရဖို့ ကြိုးစားရတာပါ။ရွံ့ထဲမှာ ​ဆော့ရတဲ့မစ်​ရှင်​​လည်းပါပါတယ်​။​နောက်​ဆုံးမစ်​ရှင်​ဆိုလည်း bar code​တွေရှာပြီး game worldထဲကထွက်​လို့ရ​အောင်​ လုပ်​ရမှာဘာ​။ ဒါ​ပေမဲ့ သူတို့ထဲမှာ angel codeနဲ့gate keeperဆိုပြီးရှိပါတယ်​။angel codeကဂိမ်းတခုလုံးရဲ့mainပါ။ ဘယ်​သူက​နောက်​ဆုံးဂိမ်းထဲက ထွက်​နိုင်​မလဲ ကွကိုယ်​​ဒေါင်းကြည့်​လိုက်​ပါ​တော့။ဘာသာပြန်​သူက​တော့ golden frogပါ။
Running Man Ep-301 Myanmar Subtitle
Running Man(China Vs Korea) Myanmar Subtitle
ဒီတစ်​ခါ​တော့အ​ပြောင်းအလဲ​လေးဖြစ်​သွား​အောင်​China Running Man​လေးတင်​​ပေးလိုက်​ပါတယ်​။China Running Manဆို​ပေမဲ့Korea Running Manလည်းပါတယ်​။Korea RMက​တော့ဧည့်​သည်​အ​နေနဲ့ပါ။
China Rmလည်းကြည့်​လို့​ကောင်းပါတယ်​။ပထမမစ်​ရှင်​က​တော့ကိုရီယားrunning man​တွေလို့ရထား​ပေါ်မှာထမ်း​ဆောင်​ရတဲ့မစ်​ရှင်​ပါ။​တော်​​တော်​လည်းကြည့်​​ကောင်းပါတယ်​။ဒုတိယမစ်​ရှင်​ကလည်းသူတို့ရဲ့campအတွက်​Runningဒင်္ဂါး​(Rအ​ကြွေ​စေ့)​တွေစုရတာပါ။စုဖို့ကလည်း​တော်​​တော်​ခက်​ပါတယ်​။​တတိယ​မြောက်​မစ်​ရှင်​မှာ​တော့korea rmစပါလာပါပြီး။ဇာတ်​ရှိန်​လည်းပိုတက်​လာတာ​ပေါ့ဗျာ။ကျန်​​တဲ့မစ်​ရှင်​နှစ်​ခု​တော့မ​ပြောပြ​တော့ဘူး​နော်​။ကွကိုသာ​ဒေါင်းကြည့်​လိုက်​ကြ​တော့။ဘာသာပြန်​သူက​တော့Thomas Nicolasပါ။
China Vs Korea(567mb)Download
China Vs Korea(125kb)Download
Running Man VideoများDownloadလုပ်​ရန်​အ​ကောင်းဆုံးBrowser
ADM Pro Download Link
Running Man VideoများDownloadလုပ်​ရန်​အ​ကောင်းဆုံ...